Bishii Sebtember 2019, Mu'asasada 'McKnight Foundation' wuxuu ku dhawaaqay barnaamij cusub oo diiradda lagu saarayo bulshada si loo hormariyo sinnaanta iyo ka mid noqoshada Minnesota. Hadafka: U dhis mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal. Si loo dhiso mustaqbalkan firfircoon, barnaamijkan cusub wuxuu sharfayaa oo ku dhisnaan doonaa wixii aan ka barannay shaqadii aan ka taageeri jirnay bulshada sanado badan anagoo u sameynayna boos fikrado cusub. Barnaamijkan cusub, waxaan ku adkeyneynaa suurta galnimada reer Minnesota eek u aaddan isirka, dhaqanka, qowmiyadda, dakhliga, juqraafi, iyo kala duwanaansho kale si aan uga dhigno gobolkeenna mid ka shaqeeya beel walba iyo deganeheeda.
Waqti markii ay Minnesota si joogto ah ugujirto ka mid ah kuwa ugu xun ee ummadaha kala duwanaanshaha isirka, waxaan aragnaa mustaqbal halka dadka midabka leh iyo dadka asaliga ah - oo ay tahay inay maanta maraan caqabadaha hay'ad iyo nidaam - ay ku kasban karaan oo ay ku dhaqmaan awood, dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaanba ku barwaaqaysan. , oo si buuxda uga qaybqaato nolosha bulshada.
Barnaamijkena cusub wuxuu diiradda saarayaa hormarinta dhaqdhaqaaqa dhaqaale, horumarka sinnaanta, iyo ka qeybgalka bulshada.
Waxaan u aragnaa sedexda aag ee diirada lagu saarayo inay yihiin isbadal shaqo oo isdhaafiya oo raadinaya inay caawiyaan dhamaan reer Minnesota inay siyaabo kaladuwan ugu guuleystaan. Dhaqdhaqaaqa dhaqaale wuxuu higsanayaa inuu saameyn ku yeesho shakhsiyaadka; ujeedo horumar leh oo ujeedo leh inay saameyn ku yeeshaan bulshada iyo meelaha ku baahsan Minnesota; iyo kaqeybgalka bulshada ayaa ujeeddadeedu tahay in lagu dhiirrigeliyo u qareemeyn ballaaran iyo kaqeybgal kaabaya kala duwanaanshaheena sida hanti ahaan. Istaraatiijiyadaha shaqadan ayaa wali soo baxaya; waxaan hoos ku qeexaynaa fikirkayaga hore iyo qaabkeena sedexda aag ee diirada lagu saaray.
Horumar loo wada dhan yahay
McKnight ayaa rumeysan taas dhammaan Dadka reer Minnesota waxaay sifiican usameyn doonaan hadaan xirno farqiga noocan ah ee dhaqaalaha ku saleysan. Annagoo xoogga saarayna dhaqdhaqaaqa dhaqaale, waxaan higsaneynaa inaan hubino in bulshooyinka danyarta ah, dadka asaliga ah, iyo bulshooyinka midabka leh ay kaqeybgalaan oo ay wadaagaan gobolka iyo bulshada, dhaqanka, iyo dhaqaalaha, iyadoo aan sidoo kale xoojineyno tartannada dhaqaale ee gobolka Minnesota. Si taas loo gaaro, waxaan ka shaqeyn doonnaa inaan cirib tirno isirrada iyo kala-duwanaanta xagga dakhliga, guryaha, waxbarashada, iyo taajirnimada. Mashaariicda khaaska ah waxaa ka mid noqon kara koritaanka shaqooyin cusub oo taageera qoysaska, dhisidda shaqaale xirfad leh oo dheeraad ah, maalgalin aasaas adag oo ganacsatada iyo milkiilayaasha ganacsiga yaryar, iyo kordhinta helitaanka sinnaanta waxbarashada.
Inbadan oo taariikhda Minnesota ah, siyaasadaha iyo wax qabadku waxay horseedeen sinnaan la'aan iyadoo lagu duudsiinayo bulshooyinka danyarta ah, dadka asaliga ah, iyo bulshooyinka midabka leh. Gaarista horumar loo wada siman yahay waxaa loola jeedaa in dhammaan reer Minnesota ay helaan fursad ay ku:
ku nool yihiin bulshooyin caafimaad qaba, amaan ah;
kuxiran fursadaha dhaqaale, bulsho, iyo dhaqan; iyo
u isticmaalaan codkooda si ay u saameeyaan go'aamada qaabeeya halka ay ku nool yihiin.
Horumarinta horumarinta sinaanta waxaa ka mid noqon kara dadaallada lagu ilaalinayo laguna soo saarayo guryo la awoodi karo; si loo hubiyo inay sabool hoose yihiin, dadka asaliga ah, bulshooyinka soogalootiga ah, iyo bulshooyinka midabka leh waxay saameyn ku leeyihiin go'aamada maxalliga ah; iyo in lagu soo rogo dhaqammo loo wada siman yahay maalgashiga kaabayaasha bulshada.
Maaddaama bulshooyinka ku nool gobolka Minnesota sii wadayaan isbeddelada, deganayaashu waxay raadinayaan qaabab ay iskula xiriiraan, u dhisaan buundooyin kala jaad ah, xalliyaan dhibaatooyinka, iyo abuurista fursado wax looga qabto sinaan-darrada iyo kobcinta barwaaqada. In kasta oo Minnesota ay leedahay dadaalo badan oo hal-abuurnimo ah oo wax looga qabanayo sinaan la'aanta midab-kala-sooca iyo dhaqaalaha, dadaalladan ayaa sida caadiga ah lagu qaaday go'doomin. Si loo sameeyo horumar dhab ah, waxaan u baahan nahay dhaqammo badan, dhaqammo kaladuwan, dhinacyo badan, iyo hogamiyayaal badan oo soo saari kara kuwaas oo isku dubaridi kara dadaallada lagu dhisayo awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeyb qaadashada guud ahaan gobolka Minnesota.
Kaabayaal bulsheed oo xoog leh ayaa taageeri doonta bulshooyinka isu keenaya qiyamka iyo danaha guud. Kaqeybgalka bulshada noocaas ahi waxay u suurtogelinaysaa bulshooyinka inay qeexaan, ficil ku sameeyaan, oo ay gaaraan ujeedo la wadaago. Waxay kaloo taageeri kartaa dimoqoraadiyad buuxda oo loo dhan yahay iyo wakiilnimo; jiil cusub oo hogaamiyaasha bulshada ah; iyo xoog, sheekooyin qiimeyn ku saleysan oo kor u qaadaya bulshooyinkayaga & #8217; danaha guud.